Sida loo rakibo iOS 13 ama iPadOS iPhone ama iPad | War gadget
Qolka Ignatius | | Mobiles, Kiniiniga
Mar kasta oo Apple, ama shirkad kasta oo kale ay soo saarto nooc cusub ama cusboonaysiinta nidaamkeeda hawlgalka, waxaa lagugula talinayaa inaad sugto maalin si loo hubiyo inaysan ku jirin dhibaatooyinka hawlgalka si aad u joojiso qalabkeena. Laakiin taasi waa waxa betas loogu talagalay.
Kadib dhowr bilood oo betas ah, shirkadda Cupertino ayaa sii deysay nooca, sidaas darteedna xasilloon, ee macruufka 13, oo ah nooc cusub oo macruufka ah oo iPad-ka caan ku siinaya. Xaqiiqdii, nooca iPad-ka waxaa loo beddelay iPadOS. Halkan waxaan ku tusaynaa sida loo rakibo macruufka 13 / iPadOS on your iPhone ama iPad.
Maxaa ku cusub macruufka 13
Kahor intaadan cusbooneysiin qalabkeena waa inaan Hubi midkeenna iPhone ama iPad midkoodna isma waafaqsana leh noockan cusub ee macruufka ah. Apple waxay diiradda saartay dhammaan dadaalladeeda iOS 12 hagaajinta waxqabadkeeda, wax ay ku guuleysatay si guul leh, xitaa aalado duug ah, taas oo ahayd tilmaan muujinaysa in iOS 13 aysan la jaan qaadi karin isla teknolojiyadda sida iOS 12.
1 IOS 13 Qalabka La-jaanqaadi karo
1.1 iPhone la jaan qaada macruufka 13
1.2 iPad la jaan qaada macruufka 13
1.3 iPhone iyo iPad oo aan ku habboonayn iOS 13
2 Sida loo rakibo macruufka 13
2.1 Kaabta la iTunes
2.2 Kaabta la iCloud
3 Cusbooneysiinta iOS 13
3.1 U cusbooneysii macruufka 13 ka iPhone ama iPad
3.2 Cusboonaysii in macruufka 13 ka iTunes
IOS 13 waxay la jaan qaadi kartaa dhamaan terminaalladaas oo ay maamusho 2 ama ka badan GB oo RAM ah. Sidan oo kale, haddii aad haysato iPhone 6s wixii ka dambeeya ama jiilka labaad ee iPad Air waxaad fursad u leedahay inaad ku cusboonaysiiso macruufka 13.
Haddii, dhinaca kale, aad haysatid iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air ama iPad mini 2 iyo 3, waa inaad u deji inaad ku dhejiso iOS 12, Nooc bixiya waxqabad ay dad badani jeclaan lahaayeen nooca macruufka ah ee qalabkooda ee joojiyay helitaanka cusbooneysiinta waqti hore.
iPhone la jaan qaada macruufka 13
iPhone 11 (warshad loo soo diray macruufka 13)
iPhone 11 Pro (warshad lagu soo diray macruufka 13)
iPhone 11 Pro Max (waxay ka yimaadeen warshadda leh iOS 13)
iPad la jaan qaada macruufka 13
iPad Pro 9,7 inji
iPad Pro 12,9-inji (moodooyinka oo dhan)
iPad Pro 10,5 inji
iPad Pro 11 inji
iPhone iyo iPad oo aan ku habboonayn iOS 13
iPad Air (jiilka XNUMXaad)
Sida loo rakibo macruufka 13
Sannad ka dib iOS 12, qalabkeennu waa buuxa faylasha qashinka ah kuwaas oo soo saarayay codsiyada aan ku rakibnay qalabkeenna, markaa waa wakhti fiican in la nadiifiyo qalabka. Taasi waa, waa inaan sii wadnaa inaan tirtirno qalabkeena oo dhan si aan u sameyno rakibo nadiif ah, oo laga soo bilaabo xoqida, iyada oo aan la jiideynin waxqabadka ama dhibaatooyinka meelaha bannaan ee qalabkeenu la xanuunsan karo
Haddii aynaan sameynin, qalabkeennu waxay u badan tahay uma shaqeeyo qancinmaaddaama ay saameyn ku yeelato fowdo gudaha ah oo ah qaab codsiyo / faylal ah oo aan la isticmaalin laakiin weli ku jira qalabka.
Haddii aan sameyno rakibid nadiif ah oo ah iOS 13 oo aan soo celinno kaydinta, waxaan dooneynaa inaan helno isla dhibaatada in haddii aan si toos ah ugu cusbooneysiino qalabkeenna macruufka ah 12 illaa iOS 13 iyadoon laga tirtirayn dhammaan waxyaabaha ku jira
Kaabta la iTunes
Haddii aad weli rabto inaad cusboonaysiiso macruufka 13 ka macruufka 12, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa sameynta gurmad. Ku rakibidda nooc ka mid ah nidaamka qalliinka nooc ka horreeyay ayaa sababi kara cillad nagu qasbi inaan soo celino qalabkeena.
Haddii ay arintu sidan tahay, oo aanaan haysan keyd, waxaan waayi doonaa DHAMMAAN macluumaadka aan ku keydinay goobteena. Si looga fogaado dhibaatada noocan ah, ka hor inta aan la cusbooneysiin nooca cusub ee nidaamka hawlgalka, kiiskan macruufka 13, waa inaan nuqul nuqul ah ka sameyso aaladdayada iyada oo loo marayo iTunes.
Si aad u sameyso nuqul iTunes ah, waa inaan ku xirnaa iPad ama iPhone kumbuyuutar, furo iTunes oo guji astaanta mataleysa qalabkeena. Daaqada la soo bandhigi doono, waa inaan gujino kaabta. Nidaamka Waxay qaadan doontaa waqti ka badan ama ka yar iyadoo kuxiran meesha aan degnay qalabkayaga markaa waa inaan si fudud u qaadno.
Kaabta la iCloud
Haddii aan leenahay qorshe kaydinta iCloud, sawirradeenna oo dhami waxay ku jiraan daruurta, sidoo kale dhammaan dukumintiyada la jaan qaadi kara adeegga kaydinta daruuraha Apple Tani waxaan waad iska ilaalin doontaa inaad sameyso keyd laga bilaabo terminalkeena maadaama dhamaan macluumaadka ku yaal si aamin ah loo keydiyay. Marka terminaalka la cusbooneysiiyo, waa inaan dib u soo dejisanno dhammaan codsiyada aan rakibnay.
Hadaan rabno sii wad isla codsiyada aan ku haysannay macruufka 12, sidaasna u jiidaya dhammaan dhibaatooyinka aan kor ku soo sharaxay, waxaan ka sameysan karnaa nuqul nuqul ah terminalkeena ku yaal iCloud, si marka loo cusbooneysiiyo aan u soo celin karno dhammaan codsiyada aan rakibnay
Cusbooneysiinta iOS 13
Kadib markaan fuliyay dhamaan talaabooyinka aan kor kusoo sharaxay, daqiiqada la rabo ee u cusbooneysii macruufka 13. Nidaamkan waxaan ka samayn karnaa iPhone-keena ama iPad-ka ama si toos ah iTunes. Haddii aan ka sameyno iPhone ama iPad waa inaan ku dhaqaaqnaa tallaabooyinka soo socda:
U cusbooneysii macruufka 13 ka iPhone ama iPad
Cusbooneysiinta Software-ka gudaheeda waxaa lagu tusi doonaa inaan haysanno nooc cusub oo iOS ah oo aan rakibno, gaar ahaan iOS 13 faahfaahinta noocaan cusub.
Si aan ugu gudubno rakibaadda, waa inaan gujinnaa Soo Degso oo rakib.
Si cusbooneysiintu u dhacdo, terminalkeennu waa inuu noqdaa ku xidhan shabakad WiFi ah iyo xeedho. Batariga terminalka waa inuu ka sareeyaa 20% howsha rakibida si ay u bilaabato.
Cusboonaysii in macruufka 13 ka iTunes
Haddii aad tahay qof caadi ah oo aad rabto inaad sii wado cusbooneysiinta qalabkaaga adoo adeegsanaya iTunes, waa kuwan tallaabooyinka la raacayo.
Marka hore waa inaan ku xir kumbuyuutarradeena iPhone ama iPad kombiyuutarka.
Waxaan fureynaa iTunes oo aan gujineynaa icon matalaya qalabka waxaan rabnaa inaan cusbooneysiino.
Midigta kore, meesha macluumaadka terminalka lagu soo bandhigo, dhagsii Hubi cusboonaysiinta.
Markaan aqbalno shuruudaha, iTunes ayaa bilaabmi doonta soo dejiso cusbooneysiinta oo hadhow cusbooneysiiya qalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Sida loo rakibo iOS 13 ama iPadOS iPhone ama iPad